अन्तर्वार्ता – America Nepal
बोर्ड पाण्डा: ताइवानको यी परिवारका सदस्य उमेर भइसक्दा पनि संसारका सबैभन्दा जवान देखिने सम्भवतः पहिलो परिवार हो । सबैभन्दा पहिले इन्टेरियर डिजाइनर र फेसन ब्लगर ल्यूर सू (४१) ले लाखौं मानिसलाई आफ्नो उमेर बताएर चकित पारिदिइन् । तर उमेर बढेसँगै जवान देखिनेमा उनको परिवारमा उनीमात्र एक्ली सदस्य भने होइनन् । ल्यूरका दुई बहिनी स्यारोन (३६) र फेफे (४०) पनि कलेजका छात्राजस्ता
वासिङटन, वैशाख १८ । इराक र सिरियामा इस्लामिक स्टेट (आइएस) लडाकूविरुद्ध जारी अमेरिकाआवद्ध हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ३५२ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले आइतबार (हिजो) सो जानकारी दिएको छ । सिरिया र इराकमा भएका तीे हवाई आक्रमणहरु सन् २०१४ अगस्तबाट २०१७ मार्च महिनासम्म भएको थियो । सो समयमा आइएस लडाकूविरुद्ध जारी रहेका हवाई आक्रमणमा मारिएका
बिबिसी ,नयाँ दिल्ली , चैत १६ – ‘सन् २०१३ मा भारतमा बलात्कार सम्बन्धि कानुन कडा बनाइएपछि त्यसको प्रयोग निर्दोषहरुलाई फसाउँन प्रयोग भइरहेको छ ।’ यस्तो मान्छिन् मानुषी पत्रिकाको संस्थापक तथा आइसीएसएसआरकी प्रोफोसर मधु किश्वर । उनले बलात्कारसम्बन्धि कानुनका कयौँ प्रावधान हटाउन माग गर्दै दिल्ली स्थित हाइकोर्टमा एक जनहित याचिका दायर गरेकी छिन् । किश्वरका अनुसार पीडित जस्तै
एक्सन फर सोसल चेन्ज -‘हात्तीको जस्तो देखाउने एउटा र चपाउने दाँत अर्कै ।’ उनका पछिल्ला गतिविधी र व्यवहार हेर्दा यस्तै लाग्छ । समाजसेवाको खोल ओडेर उनले चलाइरहेको धन्दा के हो ? वीर अस्पतालको हाताभित्र रहँदा जे भोगे,जे देँखे आज लेख्दैछु समाजसेवी दीक्षा चापागाइको चरित्र । मेरो नाम पवित्रा लामा ,घर काभ्रे । रहरै रहरमा रेडियोमा बोल्न थालेको तीन वर्ष पूरा भइसकेछ । धुलिखेलमा रहेको
दाइजोको बहस धेरैजसो चल्छ। दाइजो लिनु या दिनु गैह्रकानुनी हो, यो सबैलाई थाहा छ तर लिनेदिने क्रम रोकिएको छैन। र, सायद सजिलै रोकिदैन पनि होला। किनकि यसले अशिक्षितभन्दा पढेलेखेका परिवारमा झन् तलैसम्म जरा गाडेर बसेको छ। भर्खरै मंसिर महिना सकिएकोमा खुसी भएका महिलाहरुको फेसबुक स्टाटस पढ्न पाइयो। यसले पनि प्रष्ट पार्छ दबाब कति हुन्छ विवाहको भनेर। पहाडे समुदायमा थाहा छैन तर हाम्रो
काठमाडौं , २८ मंसिर। काभ्रेको सानोबाङथलीमा मंसिर २४ गतेको घटनाले यतिबेला बजार तातेको छ । स्थानीय लक्ष्मी नेपालीलाई ‘बोक्सी’ आरोपमा कुटपिट गरी हत्या छिमेकीले गरेको आरोप घटनाका प्रत्यक्षदर्शी मृतक परियारका १० बर्षिय छोरा सुमन परियारको छ । मृतकका १० वर्षीय छोरा सुमनको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यो घटनामा प्रहरीको समेत हात रहेको छ । घटनाबारेमा जानकारी दिँदै सुमनले भने,
काठमाडौं । कञ्चन शर्मा रेग्मीले कान्तिपूर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम सुमनसँगमा आएर जीवनमा आफूले भोगेका पीडा र परिवारले आफूमाथि गरेको अभद्र व्यवहार बारे सबैलाई बताईन् । उनले भोगेको पीडा सुनेर भावुक नहुने कोही थिएनन् । तर उनले बोलेका धेरै कुराहरु झुट भएको खबर पनि केही दिनमा नै सार्वजनिक भयो । उनको कपोकल्पित कथाले सुमन खरेल जस्ता पाका पत्रकार पनि विवादमा आए । खास
काठमाडौं, ७ मंसिर – पवित्र समाज सेवा नेपाल नामको गैर सरकारी संस्था सञ्चालन गरी मिडियामा चर्चामा आउन खोज्ने दिक्षा चापागाईले नेपालका प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई बेवकुफ बनाउने प्रकरणलाई रोकेकी छैनन् । इन्जिनियर मोहन रेग्मीकी सम्बन्ध विछोड गरेकी श्रीमती कञ्चन रेग्मी शर्माको अन्तरवार्ता कान्तिपुर टेलिभिजनको सुमनसँग भन्ने कार्यक्रममा आएपछि सामाजिक सञ्जाल र
करिश्मा मानन्धरको पिडा - अवार्ड आयोजक सिक्किम लगेर हराए, आयोजक हराउँदा होटलको बिल आफै तिरेर फर्किनु पर्यो | खास के भएको थियो सिक्किममा जसले गर्दा करिश्मा अलपत्र परिन ? यसरी सुनाउछिन करिश्मा - हेर्नुहोस भिडियो अन्तरबार्ता